Onye Anyị Bụ? - Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd.
Ezigbo ndị ahịa! Obi dị m ụtọ ịhụ gị ebe a!
Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd, hiwere na 2016, mejupụtara otu ndị ọrụ nka na ahịa nwere ahụmịhe bara ụba na chaja ikuku ekwentị. The technicals, ndị nwere 15 ~ 20 afọ ahụmahụ na mmepụta management, technology mgbanwe atụmatụ na mara-how na wireless chaja ubi, si Foxconn, Huawei na ndị ọzọ ama ụlọ ọrụ . Anyị na-elekwasị anya na R & D, mmepụta nke wireless chaja equipments maka mobile phones, TWS earphones na apple Watches , na-enye ọkachamara wireless chaja ngwọta.Anyị bụ ugbu a WPC so na Apple so.
Ngwaahịa anyị niile agafeela asambodo CE, RoHS, FCC. Ụfọdụ nwere asambodo QI na MFI.
A haziri ngwaahịa niile a haziri ahazi nwere ikikere ọdịdị nke anyị.
Mere Na China abụrụla usoro ikpo okwu B2B anyị kemgbe 2020. Anyị agafeela nyocha ụlọ ọrụ nke emere na China.
Ebumnobi anyị bụ ịghọ “Onye nrụpụta ọgụgụ isi” nke klaasị mbụ nke ụdọ ọkụ na ngwaahịa eletrọnịkị mkpanaka, anyị na-agba mbọ ịchọpụta teknụzụ kachasị elu kwa afọ. Anyị nwere ike ime OEM na omimi ODM na-eje ozi maka ndị ahịa anyị bara uru ma anyị ji n'aka na anyị ga-enyekwu uru maka ndị mmekọ anyị.
Ka afọ nke mmepe ngwa ngwa gasịrị, azụmahịa anyị agbasawanyela na ahịa ụwa dị iche iche, dị ka China China, Japan, South Korea, Middle-East, Southeast Asia, Europe, United States na mpaghara ndị ọzọ. Anyị na-achọ nkwado dị mma na gị ndị ahịa a na-akwanyere ùgwù.